အားသွင်းခေါင်း/ကြိုးကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ? – BARMASO
In Just Sharing0comment
Cable နှင့် charger ကို ဘယ်လိုရွေးဝယ်ရမလဲဆိုတော့...
(စာကတော့ရှည်တယ်။ ဒါပေမယ့် safe ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ရေရှည်သုံးနိုင်ဖို့ သေချာဖတ်ပြီးမှသာ ဝယ်တင့်ပါတယ်။)
မလောဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့သွင်းချင်ရင် ↓↓↓
iPhone/Xiaomi/Samsung/Vivo/Oppo/Huawei နှင့် အခြား ဖုန်း brand တွေ အားလုံးအတွက် အောက်ပါအမှတ်စဉ် ၁ နှင့် ၈ ကိုတွဲသုံးပေးပါ။ ကြိုးခေါင်း နှစ်မျိုးကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ရေရှည်အကြမ်းခံ သုံးဖို့ပါ။ ခေါင်းလည်း 12w၊ ကြိုးလည်း 12w။ အရမ်းတင့်တော်တဲ့ တွဲဖတ်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ စိတ်ချလက်ချနဲ့ သွင်းထားချင်သူတွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: 12w ဆိုတာ flapship ဖုန်းတွေအတွက် နှေးတယ်ဆိုပေမဲ့ တော်တော်များများ mid-ranged နှင့် basic ဖုန်းတွေအတွက်တော့ အမြန်သွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထင်မသေးစေချင်ဘူး။ သုံးကြည့်ပါ။ နောက်ပြီး အမှတ်စဉ် ၁ အားသွင်းခေါင်းကို function အပိုပါတဲ့ကြိုးနဲ့ တွဲသုံးကြည့်ချင်ရင် အမှတ်စဉ် ၉၊ ၁၃၊ ၁၅ နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတယ်။ 12w မြန်နှုန်းထွက်မယ်။
အမှတ်စဉ် (၂) က အားပြည့်သွားတာနဲ့ auto ဖြတ်ချပေးမယ့် အားသွင်းခေါင်းလေးပါ။ အမှတ်စဉ် ၈၊ ၁၃၊ ၁၅ နဲ့ တွဲသုံးလို့ရပါတယ်။ 12w မြန်နှုန်းထွက်တယ်။ ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းနဲ့သွင်းလို့ရတယ်။ ဘယ်ဖုန်း brand ထဲကဖုန်းမဆို သွင်းလို့ရတယ်။ Matching လည်း ဖြစ်တယ်။
အမှတ်စဉ် (၇) က တစ်ပြန်တည်းနဲ့ ဖုန်းလေးလုံး အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ multitasking charger လေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ် ၈၊ ၉၊ ၁၃၊ ၁၅ နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတယ်။ ထွက်နှုန်းက အမှတ်စဉ် (၇) မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ထဲကို ဝင်ဖတ်ပေးပါ။
အမြန်သွင်း fast charging နဲ့သွင်းချင်ရင် ↓↓↓
Samsung (သို့) အခြား QC 3.0 (18w) supported ဖြစ်တဲ့ Andriod ဖုန်းတွေအတွက် အမှတ်စဉ် ၃ နှင့် ၁၀ ကို တွဲပေးပါ။ တွဲပေးလိုက်ပါ။ Perfect match ပဲ။
iPhone 8 ကနေစပြီး iPhone 12 Pro Max အထိက 20w မြန်နှုန်းစနစ်နဲ့ ကောင်းကောင်းသွင်းလို့ရတယ်။ ပုံမှန်အားသွင်းခေါင်း 5w ဟာထက် ဆချီပိုမြန်တယ်။ safe လည်းဖြစ်တယ်။ စိတ်ပူစရာမလို့ပါဘူး။ Apple ကိုယ်တိုင်လည်း အမြန်သွင်းစေချင်ပါတယ်။ ဒီ 20w မြန်နှုန်းအတွက် လုံး၀ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ အော်ခေါင်း၊ ကြိုးလိုသုံးချင်ရင် အမှတ်စဉ် ၄ နှင့် ၁၁ ကို တွဲပေးပါ။
အပေါ်က ညွှန်ပေးထားတဲ့ MFI အားသွင်းခေါင်း နှင့် ကြိုးက ဈေးကောင်းတယ်။ အဲ့လောက်မသုံးချင်ဘူး၊ Quality အညံ့စားလည်း မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် အမှတ်စဉ် ၅ နှင့် ၁၂ ကို တွဲသုံးလိုက်ပါ။
အကယ်၍ မိမိအိမ်မှာ iPhone 8 နှင့် အထက်မော်ဒယ်ကို သုံးနေတယ်။ Samsung သို့ အခြား QC 3.0 (18w) supported ဖြစ်တဲ့ Andriod ဖုန်း အမြင့်တန်းလည်းသုံးနေတယ်ဆိုရင် အမှတ်စဉ် ၆ ကို ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၄ နှင့် တွဲပေးလိုက်ပါ။ တပြန်တည်း (၂) လုံးသွင်းလို့ရပါတယ်။ (၂) လုံးတပြန်တည်းသွင်းရင် စုစုပေါင်း 15w ပဲထွက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ iPhone ပဲသွင်းသွင်း၊ QC 3.0 Andriod တွေပဲသွင်းသွင်း တစ်ခုပဲ သွင်းရင် standard speed 20w/18w အပြည့်ရမယ်။ သီးသန့် အမြန်သွင်း အားသွင်းခေါင်း နှစ်လုံးကို ဝယ်ထားစရာ မလိုတော့တာပေါ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အမှတ်စဉ် (၁၄) က 100w အားသွင်းကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ PD စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုက်တဲ့ Type C ခေါင်းနဲ့တွဲပြီး ကြိုက်တဲ့ Type C ဖုန်း၊ ဘယ် Type C ဖုန်းမဆိုအားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းက အများဆုံး 100w အပြည့်ထွက်နိုင်တယ်။ ကြိုက်တဲ့ Type C port Laptop ကိုလည်း အားသွင်းပေးလို့ရတယ်။ Device တိုင်းကို 100w အပြည့်သွင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ လိုသလောက် ကိုက်ညီသလောက်ပဲ သွင်းပေးတာပါ။ စိတ်ပူစရာ လုံးဝမလိုပါဘူး။
၁။ Original 12w Charger -> https://bit.ly/2WPrG2f
၂။ Auto Cut Off Charger -> https://bit.ly/2WZsQIr
၃။ QC 3.0 Charger -> https://bit.ly/3tjf27u
၄။ MFI 20w PD Charger -> https://bit.ly/3DOKqiK
၅။ Premium 20w PD Charger -> https://bit.ly/3BIhuHt
၆။ 20w PD + QC 3.0 Charger -> https://bit.ly/3jIZ17o
၇။ Multitasking Charger https://bit.ly/3th0pRW
၈။ Hard-wearing Nylon Cable -> https://bit.ly/3nd8W7g
၉။ Auto Cut Off Cable -> https://bit.ly/3yP7p9P
၁၀။ QC 3.0 Cable -> https://bit.ly/3yMtCFm
၁၁။ MFI 20w PD Cable -> https://bit.ly/2VfZvIK
၁၂။ Premium 20w PD Cable -> https://bit.ly/3thxZqO
၁၃။ Double Sided Cable -> https://bit.ly/2VisPyt
၁၄။ 100w PD Cable -> https://bit.ly/38IGoKM
၁၅။3in 1 Cable -> https://bit.ly/38JRi2Q
၁။ လုံးဝမကြမ်းခံ hard-wearing nylon နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ မပေါက်မပြဲတတ်။
၂။ ကြိုးတွေကို ခေါက်သိမ်းလို့လွယ်အောင် strap လေး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
၃။ Watt အား အစစ်အမှန် ထွက်ပါတယ်။
၁။ Premium chipset နဲ့ လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် safe အရမ်းဖြစ်စေပြီး အားသွင်းတာလည်း မီးအား current flow stable ဖြစ်စေတယ်။ Watt မြန်နှုန်း အမှန်လည်း ထွက်ပါတယ်။
၂။ Charger အပြင်ကော်သားက PC အကောင်းစားနဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့အတွက် socket တွေ မတော်တဆ short ဖြစ်သွားရင်လည်း charger က မီးမလောင်တတ်ဘူး။
လမ်းကြုံရင် အောက်ပါဆိုင်ပေါင်း (၁၆၀) ကျော်မှာ
Barmaso အားသွင်းခေါင်း အားသွင်းကြိုးကို ဖောက်စမ်းကြည့်ပါ။
ကိုင်ကြည့်ရုံနဲ့ premium quality မှန်းသိသာစေရမယ်။ 🥰🥰
Cover Mart 1 (လှည်းတန်း 09777311778~9)
Cover Mart2(လှည်းတန်း 09777311778~9)
Cover Mart3(လှည်းတန်း 09777311778~9)
Cover Mart4(ပန်းဘဲတန်း 09777311778~9)
Cover Mart5(လှည်းတန်း 09777311778~9)
Cover Mart6(လှိုင်မြို့နယ်၊သံလမ်း 09777311778~9)
ကိန္နရီ (မြောက်ဒံဂုံ City Mart အနီး 09450804030)
Phone King Main Branch (ကျောက်မြောင်း 0973133435)
Phone King – I (Yuzanna Plaza အရှေ့ 0973083435)
Phone King - II ( တာမွေ 01-206411)
Phone King – III (သိမ်ဖြူလမ်းမ 01-394857)
Sprits - 1 ( စမ်းချောင်း - 09775330034 )
Sprit –2( မြေနီကုန်း- 09 774304423)
Unique5(ခြောက်ကွေ့ 0973171212)
Zaw Zaw Mobile (စမ်းချောင်း 095111844)
ICE (လမ်းမတော် 09421094859)
MKK Mobile ( အရှေ့ဒဂုံ 09 790143906)
Yadanar Toe Mobile ( မှော်ဘီ 09 5093103)
Technoland (ပန်းဆိုးတန်း 09 972508822)
Han Thar Mobile ( အ‌ရှေ့ဒဂုံ 09 683055954)
Central Mart ( တောင်ဥက္ကလာပ 09955588829 )
Ma Khin Aye Store (စမ်းချောင်း 09258117168)
Hledan Mobile (လှည်းတန်း 09420018478)
AKT Mobile ( တောင်ဥက္ကလာ 09 959265760 )
Grahambell Mobile (မြောက်ဥက္ကလာ 0944803334)
Thaw Thaw Mobile ( လှည်းတန်း 09 254740003 )
CTM (Lanmadaw 09252000940)
Star Mobile ( ကြည့်မြင့်တိုင် - 09 450002603 )
i Fone Mobile (သင်္ယန်းကျွန်း 09972249999)
K & K Mobile ( စံပြဈေး _ 09 979224344 )
BARMASO Shop 1 (Pansodan 09777888749)
BARMASO Shop2(Pazundaung 09777500663)
BARMASO Shop3(Times City 09777888497)
BARMASO Shop4(Junction Square 09445021554)
BARMASO Shop5(Junction City 09880854603)
ရန်ကုန် လှည်းကူး - SMILE Cover & Accessories (09977485001)
ရန်ကုန် တိုက်ကြီး - Venus Mobile ( 09 955730992 )
ရန်ကုန် တွံတေး - Shwe Pyay Aye (09785396065)
Mobile Like 1 (၃၅လမ်း 09454000000)
Mobile Like3(မြဝတီမင်းကြီးလမ်း 09454000000)
Orange Store (၃၁ နှင့် ၈၁ လမ်းထောင့် 02 406 8555)
Golden Lion (092061680)
San Taw Tar (09974999469)
Sky Star (09440551552)
Cover Garden ( 09 401541403)
MobiStar Mobile (09973121007)
ငွေနှင်းမှုန် Mobile ( 09790124987)
Cinderella Mobile (09 892537322)
Sun Mobile (09777987440)
Mobile Ayeyarwaddy (ကုန်သည်လမ်း)
Mobile Ayeyarwaddy (ကမ်းနားလမ်း)
Mobile Ayeyarwaddy (ကင်မလင်းကျွန်း)
Mobile Ayeyarwaddy Service Center
Mobile Zone (09253011211)
Mobile 1 (0943000111)
Linn Mobile and IT 1 (ဗိုလ်ချုပ်လမ်း 067 22 884)
Linn Mobile and IT2(ပေါင်းလောင်း ၄ လမ်း 067 22 884)
Linn Mobile and IT3(သပြေကုန်းရပ်ကွက် 067 22 884)
S to S Mobile (ဗိုလ်ချုပ်လမ်း 09254761877)
Laser Mobile (09797999960)
OVI Mobile (09963980009)
360 Degree Mobile Center (1)
အမှတ်(၇) ဆောက်လုပ်ရေးတိုက်တန်း 09-797360360
360 Degree Mobile Center (2)
360 Degree Mobile Center (3)
အမှတ်(၁၀) ဘူတာတိုက်တန်း 09-777360360
360 Degree Mobile Center (4)
အမှတ် (က-၄) မြစ်ဖျားဧရာ ကားကြီးကွင်း တိုက်တန်း ။
A One Mobile ( 09 442555511)
KAS Mobile ( 09 422400784)
Pioneer (095232185 )
Ifamily ( 09 43005147)
K Mobile ( 09 425273438)
Second Mobile ( 09 786582582)
IDEA Mobile ( 09 450994499 )
Grand Mobile (09 257466103)
Royal Mobile (09698162476)
Fevo Mobile (0931217775)
SMART Mobile Shop (1) – (09458809007)
SMART Mobile Shop (2) – (09266694871)
Mo To Mobile (09778872477)
Star light (09976225565)
Cover King (963644935)
One One (092061837)
Hero Mobile (09897442232)
Linn Taryar (09970096499)
Duwon Mobile (09790444557)
SP Mobile (09421763121)
Blessing Mobile ( 09 421735902 )
Pyone Cho (09789878700)
Hello Mobile (09774590190)
Cell Shell Mobile ( 09 5070544 )
Soe Moe (09955774888)
Winn Electronic (09258777577)
Golden Dargon (09428313311)
Star Kyaingdon (09445539600)
KK Mobile (09766388847)
Asia Star Mobile ( 09 425271949)
Future Light ( 09 425261364)
Kyaw Computer ( 09 973979799 )
Shun Mobile ( 09 425266599 )
Real Mobile ( 09 965343321 )
Black Diamond (09400050249)
Green Mobile (09777587660)
YC Mobile ( 09 785191748 )
D Made Mobile ( 09 5411564 )
Zwel Eain Mobile ( 09 692609661)
Core Mobile ( 09 973192967)
Top Mobile World ( 09 973129009)
Htet Mobile (09975044440)
Shane Mobile ( 09 784921172 )
Business Mobile ( 09 400514451 )
App Mobile World ( 09 790450018 )
App Studio (09 790450018 )
KN Mobile ( 09 451497966 )
Star Mobile (09428225526)
Pyae Sone Mobile ( 09 790450018 )
Zaw TI Ka ( 09 799999910)
Nyi Lay Mobile (09400523872)
National (09 401548000)
ရွှေအလင်းအိမ် ( 09 452334559)
Techno World ( 09 750298188)
ဇွဲ Mobile ( 09 780000647)
Linn Mobile (09258423332)
Friend Mobile (အောင်ဇေယျလမ်း 0943003123)
Young Zin Pyar (09420258837)
ဒေါက်တာ မိုဘိုင်း (09977780699)
Doctor Phone Mobile (09971719111)
Zaw Mobile (09255853131)
Sho Gun Mobile (09-973373666)
ရွှေမိုး Mobile (09760149833 )
Asia Light (09257110008)
ET Mobile ( 09 259933344)
Hleng Hseng Hkio Mobile (09260005359)
Mobile Aung Lan (0971715656)
Phoe Chan Mobile ( 09 401646911 )
Naing mobile ( 09 772809001)
စိုးသိပ္ပံ Mobile ( 09 976261158 )
77 Mobile (09250122393)
Family Mobile ( 09 960844818 )
မိဘမေတ္တာ Mobile ( 09 450543878)
Mr . Mobile ( 09 428328001 )
Linn Taryar Mobile ( 09 975322929 )
iBARMASO Skin နှင့် သက်ဆိုင်သော tutorial video များ။Back to Just Sharing
iBARMASO Skin နှင့် သက်ဆိုင်သော tutorial video များ။
“Magsafe နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ ကာဗာရှိလား?”
ဈေးကွက်မှာ လုံးဝမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Andriod ဖုန်း မှန်မကွဲ
UV မှန်ကပ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမျာ
BARMASO မှန်မကွဲအပိုင်း ရှင်းလင်းချက်များ။